M/weyne Erdogan ayaa dadkiisa ugu bishaareeyey helida gaas dabiici ah kii ugu badnaa.. – Hagaag.com
M/weyne Erdogan ayaa dadkiisa ugu bishaareeyey helida gaas dabiici ah kii ugu badnaa..
Posted on 21 Agoosto 2020 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo Jimco ah wuxuu ku dhawaaqay daahfurka helida gaaskii dabiiciga ahaa ee ugu badnaa taariikhda waddanka oo laga helay Badda Madow.
Khudbad uu ka jeediyay xaflad loogu dhawaaqay daahfurka ayuu ku sheegay in geedi socodka qodista oo dhan lagu fuliyay awooda qaranka, isaga oo raaciyay, “Ma lihin wax yar oo ku tiirsanaan ah dhinaca dibedda ee shaqada baarista iyo qodista”.
Wuxuu kaloo yiri, “Ilaah wuxuu noo furay oo na siiyey awood kheereysan oo weyn meel aanan ka fileynin.”
Erdogan wuxuu sharaxay in “Markabka sahaminta ee al-Fateh uu helay 320 bilyan oo cubic mitir oo ah gaaska dabiiciga ah oo ka helay ceelka Tuna.”
Wuxuu carabka ku adkeeyay in astaamaha horudhaca ah ee soo saarista gaaska ugu weyn ay muujinayaan ifafaale aad u sareeya ee jiritaanka ceelal kale oo isla aaggaasi ah.
Isaga oo sii hadlaya, wuxuu yiri “Waxaan u dhaqaaqnay kaalimaha ugu caansan adduunka annagoo u sii mareyna markabka Al-Fateh, taas oo aan ku noolnahay farxadeeda maanta, iyo sidoo kale maraakiibta Yawuz iyo Al-Qanuni,” “Waxaan hiigsaneynaa inaan gaaska badda madow ugu adeegno umadayada.”
Erdogan ayaa sidoo kale sheegay in nidaamka caalamiga uu yahay mid aan insaani aheyn, kaas oo u arka dhibic saliid ah uu uga qiimo badan yahay qubashada dhiigga dadka, isaga oo carabka ku dhuujiyey sida uu wadankiisa uga go’an tahay inuu si xidid siibid ah u xalilo arrinta tamarta wadankiisa”.
Erdogan wuxuu carabka ku adkeeyay in tamarta muhiimad weyn u leedahay gaarista madaxbanaanida qaranka, waxaa intaa u dheer inay qeyb muhiim ah ka tahay horumarka.